नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह बैठक : १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति - Naya Patrika
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह बैठक : १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति
पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ पुस | पुष २९, २०७४
नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५० को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालयमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ बैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले साझा प्रतिवेदनको ढाँचा तयारगर्ने जिम्मा नेपाली सदस्यलाई दिएको छ ।
‘अब १९५० को नेपाल–भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ इपिजीका नेपालतर्पmका सदस्य डा. राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना पनि यही अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ । यसको मोडालिटीबारे हामी चाँडै टुंगो लगाउँछौँ ।’ अर्को बैठक १२ र १३ फागुनमा काठमाडौंमा बस्ने तय भएको उनले बताए । बैठकमा सन्धिमाथि दफावार छलफल भएको थियो ।
इपिजीको पहिलो बैठक (०७३ असार २० र २१)को मितिले दुई वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । पहिलो बैठक बसेको डेढ वर्षपछि साझा ढाँचा तयार हुन लागेको हो ।
चार धारामा सघन छलफल
सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ । तर, भारतीय पक्षले अर्को बैठकमा थप राय दिएपछि यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको इपिजी सचिवालयका निर्देशक यादव खनालले बताए । बैठकमा नेपालतर्पmका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई तथा सचिवालयका सचिव यादव सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए । सदस्य भट्टराईका अनुसार बैठकमा सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
‘सबै विषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन सुरु हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै विषयमा छलफल भएको छ, यसलाई चानचुने रूपमा लिन मिल्दैन ।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ । इपिजीको कार्यकाल आगामी २१ असारमा सकिनेछ ।
गत २१ र २२ असोजमा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।
यसपटक इपिजी सदस्य आचार्यले सन्धिसहित नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापनबारे नेपालको पछिल्लो अडान पेस गरेका थिए । सदस्य उपाध्यायले नेपाल–भारत डुबान नियन्त्रणबारे विगतमा झैँ प्रस्तुतीकरण गरे भने भट्टराईले व्यापार तथा पारवहनका विषयमा धारणा राख्ने । भारतबाट सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धका विषयमा सदस्य जयन्त प्रसादले प्रस्तुतीकरण दिए भने सदस्य लामाले थप व्याख्या गरे ।
पहिलो बैठकको एजेन्डा सन्धि पुनरावलोकन
इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । १८ र १९ असोज ०७३ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । २३ र २४ चैत ०७३ मा तेस्रो बैठक काठमाडौंमै भएको थियो । इपिजीको चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक ०७४ असोज २१ र २२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।
सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता दुई देशबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भए पनि सन्धिबारे ठोस छलफल हुन सकेको थिएन । ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहसँगको औपचारिक वार्तामा विज्ञ समूहको रायसुझाब लिएर सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका वेला उनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७२ अन्तिममा भारत भ्रमणका क्रममा इपिजी सदस्य घोषणा भएको थियो । इपिजी सदस्य डा. भट्टराईले भारतमा कंग्रेस र भाजपा नेतृत्वको सरकार तथा नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकार सामेल भएका कारण इपिजीले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने जिकिर गरे ।
इपिजीका पाँच म्यान्डेट
१. विगतका सबै द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
२. दुवै सरकारले आपसी विश्वास तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत गर्नुपर्ने उपायबारे सिफारिस गर्ने ।
३. यो शताब्दीमा थप सुमधुर सम्बन्धका लागि संस्थागत फ्रेमवर्क सिफारिस गर्ने ।
४. समृद्धि, शान्ति, सद्भाव वृद्धि गर्ने तथा सीमापार अपराध निर्मलीकरण गर्नका लागि उपाय सिफारिस गर्ने ।
५. दुई देशबीचको मित्रता थप प्रवद्र्धन तथा मजबुत पार्ने अन्य उपाय छन् भने त्यसमा पनि सिफारिस गर्ने ।
सन्धिमा नेपालको माग यो थियो
नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएको कारण यसबाट यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्ने नेपालको जोड छ ।